David Luiz Oo Si Lama Filaan Ah Ugu Laabtay Asxaabtiisii PSG
HomeWararka MaantaDavid Luiz Oo Si Lama Filaan Ah Ugu Laabtay Asxaabtiisii PSG
Difaaca xulka qaranka Brazil iyo kooxda Chelsea ee David Luiz oo si lama filaan ah ugu soo biiray kooxdiisii hore ee Chelsea maalintii suuqa kala iibsiga ugu danbaysay, waxaana aad loola sii yaabay markii uu maalinkii Isniiinta dib ugu soo noqday kooxdiisii PSG si uu kaliya u macasalaameeyo Saaxiibadiisii kooxda PSG.
David Luiz ayaa si lama filaan ahayd oo deg deg badan ugu soo laabtay Chelsea kadib markii ay Blues xidigan dib ugu soo ceshatay 32 milyan oo gini. Inta lagu jiro kulamada caalamiga ah ayuu David Luiz ka faa’iidaystay wuxuuna dib ugu laabtay Paris si uu u soo macasalaameeyo xidigihii ay PSG ka wada tirsanaayeen.
Ciyaartoyda PSG ayaa markaas ku jiray tababarka ay ugu diyaar garoobayeen kulanka Saint-Etienne ee jimcaha, wuxuuna David Luiz uu la kulmay ciyaartoyda PSG uu si mid mid ah laabta u galiyay. Thiago Silva, Serge Aurier iyo Kevin Trapp ayaa ka mid ahaa xidigaha uu Luiz kaga yaabsaday soo laabashadiisa macasalaamaynta ahayd ee PSG.